Dakozia maoderina - fanaka - aingam-panahy
Sokajy: Dakozia maoderina
Hafa tanteraka ny lakozia maoderina ankehitriny. Fotsy, mainty, mena, hazo ary maro hafa. Safidio fotsiny araka ny safidinao. Ny lakozia dia toerana iray ahazoanao mahazo aina. Tsikelikely dia manjavona ilay hevitra fa toerana fandrahoana sakafo fotsiny izy io. Ny lakozia maoderina dia lasa toerana fihaonan'ny fianakaviana iray manontolo. Sehatra iray ihany koa izay fandraisana ireo mpitsidika. Zava-dehibe ny fananana lakozia maoderina mafana sy marevaka. Lakozia maoderina, azonao atao koa ny manome fitaovana miaraka amin'ny kojakoja filalaovana izay hahatonga ny habakabaka hahafinaritra. Raha tsy manana hazavana voajanahary loatra ny lakozianareo dia aza matahotra manatratra ny hazavan'ny backlighting an'ny talantalana sy ny arimoara tsirairay. Hampamirapiratra tsara ny lakozianareo izy ireo.
Latabatra sy seza ao an-dakozia
Ny ampahany lehibe amin'ny lakozia dia ny latabatra misy seza. Mila mandinika tsara an'ity singa manjaka ity ianao mba hifanaraka tsara ao anatiny. Ny latabatra inona no mety aminao? Inona avy ireo seza ao amin'ilay tsena? Hiezaka hamaly anao izahay. Vidio samy hafa ny zava-drehetra sa ho seta? Iza no mankafy fanaka mitovy? Mitondrà originality kely sy famolavolana ao an-dakozia. […]
Nosy kely ao an-dakozia
Ny lakozia miaraka amin'ny nosy dia nofinofin'ireo mpikarakara tokantrano maro. Raha nanontany azy ireo ianao hoe inona ny hevitr'izy ireo momba ny nahandro nahagaga indrindra, dia io no misy ilay nosy. Izy io dia hitondra singa mihaja sy manintona ao an-dakozia. Ny hany lesoka dia ny mila lakozia lehibe kokoa eto amin'ny nosy ianao. Inona no tokony ho refin'ny lakozia? Raha te hanana nosy any an-dakozia ianao dia tsy maintsy manana […]
Ny lakozia kely tsy olana akory
Tsy ny olon-drehetra no manana lakozia lehibe kokoa izay afaka mitana ny zavatra ilaina rehetra ary mbola manana toerana malalaka ianao. Na ny lakozia kely aza tsy manam-paharoa ary hanome anao hevitra vitsivitsy momba ny fomba hananana izay rehetra ilainao ao anatiny sy ny fomba hitahirizana lovia sy maro hafa izahay. Ny latabatra kely misy ny hatsarany Firy ny isan'ny mpikambana ao amin'ny ankohonanao? Impiry ianao no mipetraka eo ambony latabatra? Amin'izao fotoana izao […]
Fikarohana amin'ny lahatsoratra
1 2 ... 9 Older Lahatsoratra